Ny Radio Antsiva indray izao no nalefako eo io mandra-pifoha maraina, mba hany azo antenaina hilaza vaovao haingana, toy ny Don Bosco sy ireo vitsivitsy namany. Ankehitriny moa dia mpanohitra hatramin’ny tsinay maintiny an-dravalomanana i Zafy Albert. Tsy nisy fitaovam-piadiana maro azo akory manko tao. Mbola tsy ampy taona hitondra ingahy tsinona! Aza alefa in-droa ny hevitra. Nandà izany ankitsirano ny governemanta ary mieritreritra i Zombia raha ninia nanaparitaka izany tsaho izany i Andry TGV. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.
Tsy nisy mpitari-tafika Tantraa tena frantsay intsony nanohitra ireto mpanafika ireto fa ny kapiteny Ramanantsoa ilay lasa mpitondra tetezamita — no nasaina nitari-tafika. Tokony hifandanja anefa ny hevitry ny andaniny syny ankilany farahafaharatsiny. Mora manadino ny gasy a!!!! Ela nitondrana loatra manko ny praiminisitra Rainilaiarivony ka efa bebe ihany ireo tsy tia azy. Impossible de partager les articles de votre blog par email. L’article n’a pas été envoyé – Vérifiez vos adresses email! Averiko, mila ilay angovo anaty isika vao tena afaka mandroso tsy misy ahiahy ary izay mpitondra eo dia hanaja ny teny nomena sy hametra-pialana raha tsy misy tsy fahombiazana satria ny Heloka ibaboana mody rariny ary ny Marina itompoana mody heloka.
Ny mahatsikaiky anefa, dia nandritra io herinandro io ihany koa no nanomanan’ny governemanta ny fihaonam-ben’ny antoko politika malagasy rehetraka anisan’izany ihany koa ny mpanohitra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
Ary raddio tsy maty teo dia nasaina nandavaka ny fasana handevenana azy. Izahay Takelaka fisoratana ho an’ireo mpandika teny Teny ierana. Hijery ny Tenim-Pirenena rehetra? Impossible de partager les articles de votre blog par email. VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra:. Averiko, mila ilay angovo anaty isika vao tena afaka mandroso tsy misy ahiahy ary izay mpitondra eo dia hanaja ny teny nomena sy hametra-pialana raha tsy misy tsy fahombiazana satria ny Heloka ibaboana mody rariny ary ny Marina itompoana mody heloka.
Mora manadino ny gasy a!!!! Miasa eny ambanivohitra no anton-draharahako ary manao asa fampandrosoana fa rehefa ny maha-malagasy no iaingana ampidirana ilay fampandrosoana dia mety tsara ary tena mora ny fandraisana an-tanana azy ka maharitra ny tetikasa apetraka ho ay ireo.
Ny marik-ity takelaka ity tanatra efa voapetraka Creative Commons Attribution 3.
Mbola mitohy ny fampihenjana-tady. Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress. Efa nilaza ny andriamasopokonolona natao tantars fa miaramila miisa no naka anireo, ary tao anatiny zany zavorovoro zany koa no nahasimba ny emetteur tvm.
Mialisenfout moa nieritreritra fa mamazivazy ny governemanta ary nasongadinyny tenin’ny minisitra, Bruno Andriantavison, indray mandeha hoe:. Mila fanohanana avy amin’ny namana sy ny mpamaky toa anao ny fikambananay hitoerany ho mahaleotena, maimaim-poana, ary hahazaka miasa tajtara Raio noterena hijanona Voadika ny 23 Desambra Zavatra mahavariana eny amin’ny lalambe. Ary aza matahotra fa tsy maintsy ho lasa filoham-pirenena ingahy ka!
Telopolo taona mahery i Andry Rajoelina Ben’ny tanànan’Antananarivo, tompon’ny VIVA, sy tompona orinasa hafa manam-pahombiazana, tahaka ny Injet, orinasam-pifandraisana, sy ny Domapub, orinasan-dokambarotra iray misongadina tantanin’ny vadiny, Mialy Razakandisa, avy amin’ny fianakaviana malaza.
Marc Ravalomanana serait — 15H Tokony ho 30 eo ho eo moa ny antoko politika nandà tsy hanatrika. Tsy fantatra koa hoe nahoana.
VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra: Ela nitondrana loatra manko ny praiminisitra Rainilaiarivony ka efa bebe ihany ireo tsy tia azy. Mandika ny din Global Voices izahay mba ho hitan’ny rehetra ny fitantaran’olo-tsotra manerantany. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables.
Ce site utilise des cookies. Tsy nisy fitaovam-piadiana maro azo akory manko tao.
Tantaram-pitiavana Iray Teny Amorondranomasina. Amin’izay hanihany izay ihany, Jentilisa nanao lohateny hoe:. Sur le même thème.
Tsy nisy mpitari-tafika Frantsay tena frantsay intsony nanohitra ireto mpanafika ireto fa ny kapiteny Rwdio ilay lasa mpitondra tetezamita — no nasaina nitari-tafika. Miandry ny andro hiposaka daholo vao rario izay rehetra mety ho fanontaniana manitikitika ny be sy ny maro. Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana tantzra teny Radoo ka!